Sariirta ayey dhinac kaga Fadhiday, isaguna markaas ayuu Guriga soo galay. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Published: September 5, 2016, 2:03 pm
(0) Comments Sariirta ayey dhinac kaga Fadhiday, isaguna markaas ayuu Guriga soo galay.Wuxuu Tukaday Laba Rakcadood oo Sunno ah. Markii uu ka baxay Salaadda, intuu kacay ayuu Dhinaceeda Fariistay.
Ka dib wuxuu la Booday Labadeeda Gacmood. Maxaad samaynaysaa? ayey ku tiri, Muusan jawaabin ee Hawshiisii ayuu iska watay. Faraha ku yaala Gacanteeda Midig ayuu sidaa u kala bixiyey. ka dib Xubnaha Faraha ayuu mid mid u Taabtay, Afkana wuxuu ka lahaa (Subxaanallaah, Alxamdulillaah, Allahu Akbar).
Wabillaahi Towfiiq. (EEBOOW XAQA NA WAAFAJI).
« Warbixinta Ka HoreysayCarruurta & Soomaalida:- Aaladaha Casriga Ahi Waxa Ay Ubadka Ku Keenaan Caafimaad Darro Nafsi Ah..	Warbixinta Xigto »Wax Badan Ka Barro Hababka Ugu Wanaagsan Ee Ilkahaaga Dhalaal Iyo Caafimaad Ku Heli Karaan..	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Comments are closed.